Factory kugadzira China PP Polypropylene Super Wide Black/ White/ Green Agricultural Weeding Nonwoven Non-Woven Fab.
Bhizinesi redu rinoisa simbiso pane manejimendi, kuunzwa kwevashandi vane tarenda, pamwe nekuvakwa kwechikwata chekuvaka, kuyedza nesimba kuenderera mberi nekuvandudza mwero uye kuziva mutoro wevatengi vevashandi. yeFactory inogadzira China PP Polypropylene Super Wide BlackAgricultural Weeding Nonwoven Non-Woven Fabric, Gamuchirai vatengi vese vekugara uye kunze kwenyika kuti vaende kusangano redu, kuumba inonakidza kwenguva refu nekubatana kwedu. Fekitari inogadzira China Non Woven Fabric uye Non-Woven Cloth mutengo, Isu tinovavarira kuve bhizinesi remazuva ano rine bhizimusi rekutengesa re "Kuvimbika uye kusatya" uye nechinangwa che "Kupa vatengi masevhisi akatendeseka uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro". Isu tinokumbira nemoyo wese rutsigiro rwenyu rusina kuchinjika uye tinoonga zano renyu remutsa uye kutungamira.
Bhizinesi redu rinoisa simbiso pane manejimendi, kuunzwa kwevashandi vane tarenda, pamwe nekuvakwa kwechikwata chekuvaka, kuyedza nesimba kuenderera mberi nekuvandudza mwero uye kuziva mutoro wevatengi vevashandi. yeFactory inogadzira China PP Polypropylene Super Wide BlackAgricultural Weeding Nonwoven Non-Woven Fabric, Gamuchirai vatengi vese vekugara uye kunze kwenyika kuti vaende kusangano redu, kuumba inonakidza kwenguva refu nekubatana kwedu. Fekitari inogadzira China Non Woven Fabric uye Non-Woven Cloth mutengo, Isu tinovavarira kuve bhizinesi remazuva ano rine bhizimusi rekutengesa re "Kuvimbika uye chivimbo" uye nechinangwa che "Kupa vatengi masevhisi akatendeseka uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro". Isu tinokumbira nemoyo wese rutsigiro rwenyu rusina kuchinjika uye tinoonga zano renyu remutsa uye kutungamira.
Ndeapi maitiro ejira reuswa?
1. Simba repamusoro: Sezvo jira rinoratidza uswa rakagadzirwa nePP, PE plastiki yakarukwa waya, inogona kuchengetedza simba rakakwana uye kureba mumamiriro ose akaoma uye emvura.
2. Corrosion resistance: Iro jira rinodzivirira huswa rinogona kudzivisa kuora kwenguva yakareba muvhu nemvura ine pH yakasiyana.
3. Mhepo yakanaka uye mvura inopindirana: Pachava nemikaha pakati peshinda dzakarukwa, saka ine mhepo yakanaka yemhepo uye mvura.
4. Zvakanaka antimicrobial properties: hazvikuvadzi kune microorganisms uye zvipembenene, uye hazvisi nyore kuderedza.
5. Kuvaka kwakaringana: Nekuda kwekuti jira rinodzivirira huswa rakapfava, zviri nyore kutakura, kuisa, nekuvaka.
6. High breaking simba: inogona kusvika kudzvinyirirwa pamusoro pe20KN / m, ine yakanaka creep resistance uye corrosion resistance.
7. Anti-pepuru uye anti-oxidant: wedzera kunze kweUV uye anti-oxidant, ine zvakanaka anti-pepuru uye anti-oxidant zvinhu uye inogona kuratidzwa kune zuva.
Nyaya iri kunyanya kunetsa munhu wese ndeyekuti jira rehuswa ringagare makore mangani?
Kubva pamaonero ekushandiswa uye kuongororwa kwezvakatipoteredza, hupenyu hwesevhisi hwemucheka-uswa hunogona kukamurwa kuita zvikamu zviviri:
1. Kushandisa pasina mhepo: Kwemakore matatu, machira asingapindi masora akavhurika anowanzo shandiswa munzvimbo dzisina mhepo dzezvirimwa kana minda yemichero. Pamusana pekugara kwenguva refu kune kunze mushure memhepo uye zuva, simba rekudzivirira-kukwegura richaderedzwa zvikuru. Inoratidzirwa kuzuva, mhepo, mvura uye chando maawa makumi maviri nemana pazuva, saka hupenyu hwayo hupfupi, kazhinji makore matatu.
2. Kushandiswa kwemukati: Kwemakore angangoita mashanu, machira emukati-ekudzivirira huswa anowanzo shandiswa mukati meimba, greenhouses, nezvimwewo. Zvichienzaniswa nekushandiswa kwemhepo yakavhurika, simba rechiedza chezuva nemhepo rinoderedzwa zvakanyanya, uye kugona kwekudzivirira kuchembera kunogona kuderedzwa. . Inonyatso kuratidzwa, saka hushoma hwehupenyu hwesevhisi makore mashanu, uye mune dzimwe nzvimbo hupenyu hwesevhisi hunogona kunge hwakakwira semakore manomwe kana masere.
Zvakapfuura: Professional Design China PP Agricultural Landscape Anti Sora Kudzora Mats Ground Jira
Zvinotevera: Factory wholesale China Garlic uye Onion PP Plastic Weed Control Mat/Yakarukwa Dema Anti Grass Jira rine Makomba
Best Commercial Weeding Barrier Cloth
Biodegradable Weeding Mucheka
Nezvakatipoteredza Sora Chipingamupinyi Kusakura Mucheka
Mucheka Weeding Weeding
Yemhando yepamusoro PP kusakura uye anti-weeding jira ...
Fekitari yakagadzirwa inopisa-kutengesa China Wholesale 100% PP M...
Heavy Duty Weed Barrier, Kusakura Mumucheka, Biodegradable Weed Control Fabric, Weed Control Fabric Roll, Mvura Inopindira uye Inofema Weeding Mucheka, Pp Woven,